Teo am-panatanterahana ny asa ratsiny ireo mpiasan'ny Jirama miisa 9 no tra-tehaka, ary mbola tratra teny aminy ihany koa ny solika 170 litatra anatina bidon 20 litatra miisa 9. Avy hatrany, dia naiditra am-ponja vonijimaika ireo mpiasa tra-tehaka ireo, raha toa ka mbola hanaovana famotorana kosa ny mpiasan'ny Jirama Ambositra rehetra amin'izao fotoana. Manoloana izany, dia hametraka fitoriana ny minisiteran'ny angovo, ny rano ary ny Akoranafo sy ny Jirama. Efa nametraka fiaraha-miasa amin'ny zandarimaria any an-toerana ihany koa ny talem-paritry ny minisiteran'ny angovo, ny rano ary Akoranafo Ambositra ho fanamafisana ny fiambenana ity toby ity indrindra amin'izao andro fety izao. Ny halatra izay heverina fa madinika tahaka izao, no tena mandrendrika ity orinasam-panjakana Jirama ity. Tsara homarihina anefa ny 70% amin’ny famokarana herinaratra eto amintsika dia mbola mihodina amin'ny Solika avokoa ka raha misy tsy fahampiana amin'ny tobim-pamokarana iray, dia tsy maintsy miafara amin'ny fahatapahan-jiro izany. Iaraha mahalala ihany koa anefa fa latsaka an-katerena tanteraka ny orinasam-panjakana Jirama ka ny fahafahana mamongotra itony karazana halatra itony dia efa fanoitra lehibe ho an'ny fahafahana manarina ny orinasa. Noho izany, hentitra ny minisitera amin'ny fampitandremana ireo mpiasan'ny Jirama rehetra manerana ny Nosy mba tsy hiverenan'ny tranga toy izao intsony.